In Real Madrid Loo Soo Bandhigay Lewandowski, | Raadgoob
In Real Madrid Loo Soo Bandhigay Lewandowski,
Wargaysyada Spain gaar ahaan kuwa ciyaaraha sida gaarka ah uga faalooda ayaa maanta si wayn bogaga hore ee wargaysyadooda ugu soo bandhigay qodobo xiiso badan leh iyada oo lagu muujiyay dhacdooyin muhiim ka noqon kara kubbada cagta gaar ahaan Spain.
Waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa waxyaabihii ufu muhiimsanaa ee maanta ay wargaysyada Spain bogagooda hore ku soo qoreen isla qormadan ayaananu idiinku soo gudbinaynaa.
Aan ku bilownee wargayska Marca ayaa bogiisa hore ee maanta u hibeeyay gool dhaliyaha xulka qaranka Poland iyo kooxda Bayern Munich ee Roberto Lewandowski kaas oo uu sheegay in wakiilkiisu uu u soo bandhigay in Real Madrid isla markaana uu diyaar u yahay in uu Bernabeu ku soo biiro.
Waxaana boga hore ee Marca ee looga hadlay xaalada Lewandowski lagu yidhi: “Lewandowski waxa uu naftiisa u ogolaaday in la doonayo. Wakiilka ayaa Real Madrid isaga u soo bandhigay. Gool dhaliyuhu waxa uu heshiis ku jiraa June 2021, laakiin waxa uu doonayaa in uu Bayern ku qanciyo in uu doonayo tartan wayn iyo heshiis wayn”.
Wargayska Diario Sport ayaa bogiisa hore ee maanta kaga hadlay in Chelsea ay heshiis la gaadhay macalinkii hore ee kooxda Barcelona ee Luis Enrique isla markaana uu saxiixi doono heshiis laba sano iyo badh ah si uu badal ugu noqdo Antonio Conte.
Waxaana qoraalka sawirka Enrique ee boga hore la soo raaciyay lagu yidhi: “Digniin-Luis Enrique: Tababarihii hore ee Barca waxa uu heshiis la gaadhay Chelsea oo ah kooxda xigta ee Barca ay kaga hor iman doonto UCL, wuxuu saxiixi doonaa laba sano iyo badh wuxuuna badali doonaa Conte”.
Waxaana sidoo kale boga hore looga sii hadlay Yerry Mina oo kulankiisii ugu horeeyay safan kara in xaalada Pique go’aan laga gaadhi doono: “Doorashada adag ee Yerry Mina ee Mestalla. Guddida tartanku waxay go’aamin doonaan guriga Pique”.
Wargayska El Mundo Deportivo ayaa qodobo dhawr ah ku soo bandhigay boga hore ee wargayskiisa maanta waxaana udub dhexaad looga dhigay in madax waynaha Barcelona ee Bartomeu uu difaaca Gerard Pique iyo dabaaldegii uu ka sameeyay kulankii Espanyol.
Waxaana ciwaan loo dhigay: “Bartomeu oo difaacay Pique” Waxaana qoraalka la sii raaciyay hadal uu madax waynaha Barca ee Bartomeu yidhi kaas oo ah: “Dabaal degasii waa mid caadi ah, isagu ma aha ciyaartoygii ugu horeeyay ee garoon aamusiiyay isla markaana taas waxaanu ku soo aragnay Camp Nou”. isaga oo tixraaciyay ciyaartoy Camp Nou goolal ku dhaliyay oo jamaahiirta Barca aamusiiyay oo uu Ronaldo ka mid ahaa.
Intaa kadib El Mundo Deportivo ayaa bogeeda hore ku soo qortay odhaah uu sheegay barnaamij soo saaraha MOD ee Gary Lineker kaas oo uu ku xusay in Barcelona ay 13 ciyaartoy kooxaha kula ciyaarto sababtoo ah saamaynta Messi waxaana qoraalka lagu ydihi: “Barca waxay ku ciyaartaa 13 ciyaartoy sababtoo ah Messi-Gary Lineker”.